कुन चिडिया हुन् सोनिका ? - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
साप्ताहिकसँग खोलिन् पारस शाहसँगको सम्बन्धको रहस्य
- जनक तिमिल्सिना, प्रकाश रानाभाट
द्विअर्थी शब्द तथा हाउभाउमार्फत युट्युबमा सेन्सेसन क्रिएट गर्नु । यौनका बारेमा बोल्ड रूपमा प्रस्तुत हुनु । कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्नु । छोटा तथा ग्ल्यामरस पहिरनमा रमाउनु । अन्तर्वार्ताहरूमा अश्लील छेडखानी गर्नु— युट्युबर सोनिका रोकाया छवि नै बनेको थियो । यस्तै–यस्तै कारणले युट्युबमा उनका भिडियोले लाखौं भ्युज बटुल्थे । उनी युट्युब संसारकी सेन्सेसन थिइन् । पछिल्ला केही दिनयता उनी पूर्वयुवराज पारस शाहसँग बढेको हिमचिमका कारण चर्चामा छिन् ।
२५ वर्षमा हिँडिरहेको बताउने सोनिकाले युट्युबमा बेच्ने शाब्दिक नग्नताका कारण गाली मात्र खाइनन् । आकर्षक जीउडालका बीच जब उनकै शब्दमा यौन मादकता भरिएको हुन्थ्यो, मानिसहरू उनका समक्ष थरीथरीका अप्रोच गर्थे भने कोही गाली गर्थे, कोही जुत्ताले हान्छु भनेर तर्साउँथे । यद्यपि उनी फरक संसारकी सोनिका थिइन्, न ती गालीहरूले उनको जीवनमा अर्थ राख्थे, न अप्रोचहरूले नै । उनी ती सबै कुरालाई हावामा उडाउन सक्थिन् । संवेदनाको मूल्य उनको जीवनमा मृतप्राय: थियो । ‘त्यतिबेला म साँच्चै वाइल्ड एनिमल थिए,’ झण्डै चार/पाँच महिनाअघिसम्मको आफ्नो जीवशैलीका बारेमा सोनिका भन्छिन्, ‘केवल आफ्नै लागि मात्र बाँचिरहेकी ।’
ती वाइल्ड एनिमल सोनिका को थिइन् त ? न उनका बारेमा धेरै कुरा बाहिर आए, बरु युट्युबकी विवादित पात्रका रूपमा उनको छवि अझ नकारात्मक भयो । न त भर्चुअल संसारमा सोनिकाको उदण्डताको कारण नै खोजियो ? आखिर कुन चिडिया हुन् त सोनिका ? कसरी उनी त्यस्तो काम गर्न तयार भइन् ?
सोनिकाको खास नाम पूजा रोकाया हो । उनी पूजाबाट सोनिका बन्नुका पछाडि पनि अनेकन कारण छन् । बझाङ, छान्नास्थित माझीगाउँको मध्यम किसान परिवारमा जन्मिएकी हुन् उनी । उनका हजुरबुवादेखि बुवासम्म समाजसेवामा छन् । उनका बुवा बर्खबहादुर रोकाया बझाङको खप्तड छान्ना गाउँपालिकाका कांग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन् । द्वन्द्वकालमा उनका बुवाको खुट्टा भाँचिएको थियो, उनको सम्पत्ति पनि सेबोटेज गरिएको थियो । सोनिका तिनै बर्खबहादुरका पाँच सन्तानमध्येकी चौथी सन्तान (काइँली) हुन् । उनको जन्म धनगढीमा भए पनि उनी कक्षा ५ सम्म बझाङमै पढ्ेकी हुन् ।
सोनिकाले काठमाडौंस्थित प्रतिष्ठित बूढानीलकण्ठ स्कुलमा ५ देखि १० कक्षासम्म छात्रवृत्तिमा पढेकी हुन । बूढानीलकण्ठका उत्पादनहरू कोही इन्जिनियर, कोही डाक्टर बन्छन्, तर सोनिकाले कसरी बाटो बिराइन् ? त्यसको पनि आफ्नै कथा छ । राजादेखि सामान्य नागरिकसम्मका छोराछोरी पढ्ने बूढानीलकण्ठको वातावरणले विकास गर्ने कन्फिडेन्ट सोनिकामा पनि झल्किन्छ ।
बूढानीलकण्ठको उतार चढाव
सोनिकाले बूढानीलकण्ठबाटै एसएलसी गरेकी हुन् । ‘म हावामा हिँडेकी केटी हुँ,’ उनी भन्छिन्, ‘१० कक्षासम्म बुवाले एकदमै दु:ख गरेर पढाइदिनुभएको हो ।’ शिक्षाले आफ्नो जीवनमा तात्विक परिवर्तन नल्याएको दाबी गर्ने सोनिका बूढानीलकण्ठमा पढ्दा पढाइमा एभरेज भए पनि स्पोर्टस, नृत्यजस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापमा अब्बल थिइन् । उनलाई पढाएका शिक्षक कृष्ण कोइराला भन्छन्, ‘सोनिका मेरै स्टुडेन्ट हुन्, उनी नृत्य, स्पोर्टसलगायतका गतिविधिमा त डाइनामाइट नै थिइन् ।’ सोनिका कक्षा ८ सम्म आफू पढाइमा पनि एभरेज स्टुडेन्ट भएको बताउँछिन् । ‘५ कक्षापछि एक्जाममा यति ल्याउँछु भनेर टार्गेट गरेर पढे,’ रोकाया भन्छिन्, ‘८ कक्षासम्म राम्रो पर्फमेन्स थियो ।’
जब कक्षा ८ मा पुगिन् । त्यसपछि कुरा फरक धारमा अघि बढ्न थाल्यो । स्कुलका हरेक हाउसका क्याप्टेन छुटाइन्थ्यो । सोनिका हिउँचुली हाउसमा थिइन् । डान्स, स्पोर्टस, स्वीमिङ आदिमा अब्बल, पढाइमा एभरेज । त्यसकारण हाउस क्याप्टेनमा सोनिकाको पनि दाबी थियो, तर उनी क्याप्टेन बन्न पाइनन् । ‘त्यो सामान्यजस्तो लाग्ने घटनापछि मलाई अलि ह्युमिलेसन फिल भयो,’ उनले भनिन्, ‘सबै कुरामा पूजा चाहिने तर पोष्ट दिने बेला अरुलाई नै ।’ त्यही बेलादेखि आफूले अनुशासन तोड्न थालेको अनि पढाइमा ध्यान दिन छाडेको उनी बताउँछिन् ।
बूढानीलकण्ठमा पढेकी छोरीलाई उनका बुवाआमा डाक्टर बनाउन चाहन्थे, तर उनलाई त्यसमा फिटिक्कै रुचि थिएन् । उनी बाल्यकालदेखि नै भिजे बन्न चाहन्थिन् । परिवारले साइन्समा भर्ना गरिदिए पनि उनी त्यो विषय छाडेर सगरमाथा कलेजमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार पढ्न थालिन् । सोनिकाले साइन्स छाडेर पत्रकारिता पढ्न थालेको उनका बुवाले थाहा पाए । त्यसले बुवासँगको सम्बन्धमा दरार त ल्यायो नै, पैसा आउने बाटो पनि बन्द भयो । त्यसपछि उनले सिटी सेन्टरस्थित नातेदार दिदीको कपडा पसलमा काम गरेर कक्षा १२ को पढाइ पूरा गरिन् र जीवन गुजारा खर्च जुटाउन थालिन् ।
मिडियाप्रतिको नशाले नै कक्षा १२ को मध्यतिर नै उनी फेसबुक लाइभमा भिडियो बनाउन थालिसकेकी थिइन् । फेसबुक लाइभमा उनको भिडियो देखेपछि केटीएम नेपाल फेसबुक पेजले उनलाई करेन्ट इस्युमा फेसबुक लाइभमा बसेर चियोचर्चा गर्ने काम दियो । पूजाले बुवाले थाहा नपाउन् भनेर आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर सोनिका बनाइन् । केटीएम नेपालबाट फेसबुक लाइभ गर्न थालेपछि उनले ‘प्रेमगीत–२’ को टिमसँग प्रमोसनको काम दिन प्रस्ताव राखिन् । पहिलो पटक नै सन्तोष सेनले भने, ‘तिमी राम्रो बोल्दी रै’छौ, मुभी चलुन्जेल रेडियोमा प्रोग्राम गर्देऊ, हामी तिमीलाई पे गर्छौ ।’ त्यसपछि सोनिकाले एक महिना आरजेका रूपमा काम गरिन्, प्रेमगीतको प्रमोशसन टुरमा पनि हिँडिन् । बिस्तारै फिल्मी क्षेत्रका मानिसहरूसँग लिंक बनाउन थालिन् ।
त्यस क्रममा उनलाई इन्ड्रस्टीका बारेमा जानकारी हुन थाल्यो । ‘त्योबीचको समयमा पिपुल ट्राइ टु युज मी,’ उनले भनिन्, ‘यतिधेरै युज गर्न आए । किनभने, नयाँ फ्रेस जो आउँछ नि ! उसलाई त माल भनेर हेर्दिन्छन् यो इन्डस्ट्रीका मानिसहरू । त्यस्ता केही घिनलाग्दा मानिसको टार्गेट नै नयाँ पिस
हुँदा रहेछन् ।’
जब सोनिका बजारमा देखिन थालिन् । उनको आकर्षक शारीरिक बनावट तथा रूपरंगबाट मानिसहरू प्रभावित हुन थाले । विभिन्न अप्रोच र प्रलोभन आउन थाल्यो । हिरोइन बनाउनेसम्मका । त्यस्तै एउटा घटना छ— जसले सोनिकालाई डाङडुङे र बोल्ड बनाएको हो । सिंगापुरबाट फिल्म पढेर आएको बताउने एकजनाले उनलाई लन्चका लागि डिल्लीबजार बोलाए । सोनिका ट्याक्सी चढेर डिल्लीबजार पुगिन् । ‘उसले मलाई भेटौं न त भनेर बोलाएपछि म खुसी हुँदै त्यहाँ पुगें । मजस्तो फिल्म इन्ड्रस्ट्रीका बारेमा केही नबुझेका लागि एउटा अवसर हुन सक्छ भन्ठाने,’ उनी भन्छिन् । ती पुरुषले उनलाई हिँडाउँदै भित्री गल्लीमा भएको एउटा घरमा पुर्‍याए । घरमा पुगेपछि कोठाको ढोका बन्द गरे । सोनिकाले आफू रेखा थापाको ‘विग फ्यान’ भएको कुरा बताइन् । ती पुरुषले उनलाई फिल्म बनाउन लागेकाले हिरोइन सोनिकालाई नै बनाउने आश्वासनको जाल फिजाए । ‘म हिम्मत गरेर त्यहाँ पुगेकी हुँ । बन्द कोठाभित्र उसले मलाई नाच्न लगायो, म नाचे । अभिनय गर्न लगायो, मैले अभिनय गरे,’ सोनिका झक्कानिँदै भन्न थालिन्, ‘हि ट्राइ टु टच मी । ही टच माई ब्रेस्ट ।’ लामो श्वास फेर्दै उनले भनिन् ‘ओ माई गड ।’ उनी त्यो असजिलो परिस्थितीसँग लडिन्, त्यहाँबाट जबरजस्ती ढोका खोलेर बाहिरिइन् ।
यही घटनापछि उनी बोल्ड सोनिका बनिन् । कच्चीबाटोमा कच्चा तरिकाले हिँड्नुपर्छ भन्ने आफूलाई त्यही घटनाले सिकाएको उनी बताउँछिन् । ‘म त एउटा आशा बोकेर आएकी थिएँ ?’ उनले आँसु पुछ्दै थपिन्, ‘लकले फेभर गरे पनि त्यो नै मेरा लागि जीवनको सबैभन्दा ठूलो टर्निङ प्वाइन्ट थियो । मलाई डेटहरू याद हुन छाडेको पनि त्यही घटनापछि हो । मलाई डाङडुङ गर्दै हिड्ने पनि त्यही घटनाले बनाएको हो ।’
केटीएम नेपालको अन्तिमतिर र वाउ नेपाल ज्वाइन नगरिसकेको अवस्था घटेको उक्त घटनाले उनलाई अझ बोल्ड र डाङडुगे बनायो । ‘वाउ नेपालले अझ बोल्ड क्यारेक्टर निकालिदियो, जो पनि आउँथे, नेगेटिभ कुरा गर्थे । जब म डाङडुङे रूपमा प्रेजेन्ट हुन्थें, अझ नेगेटिभ कुरा गर्थे, तर म उनीहरूलाई हाँसोमै उडाउन सक्थें,’ उनी वाउरुपी सोनिकाको परिचय दिन्छिन् । सोनिकालाई थाहा छ— कतिको युटिलाइज हुने वा मिसयुटिलाइज हुने आफूमै निर्भर हुन्छ । उनी वाउ नेपालमा कहाँसम्म पुगिन्, कतिसम्म गिरेर प्रस्तुत भइन् भन्ने कुरा सबैले खुल्ला रुपमै देखेका छन् । सोनिकाको प्रस्तुति यतिसम्म छाडा थियो कि उनको युट्युब ब्यान्ड गर्नुपर्ने हल्ला मात्र चलेन, उनलाई नै बहिष्कार गर्नेसम्मका बहसहरू भए । ‘तर, अहिले उनीहरूले नै मेरा गसिपहरू बनाउन थालेका छन्, किनभने म हार खाएर भागिन्,’ उनले भनिन्, ‘हिम्मतिला र संघर्ष गर्नेहरूको कहानी छुट्टै हुन्छ ।’ अहिले सोनिका आफैले रियलाइज गरेकी छिन्— मैले एकदमै घिनलाग्दो काम गरेछु । ‘म सत्य भन्छु, मलाई परिस्थितिले त्यस्तो बनाएको हो, म जानेर बनेकी होइन् ।’
युट्युबमा सेन्सेसन क्रिएट गर्ने सोनिकाले वाउ नेपालबाट १५ हजार स्यालरी पाउँथिन् । ‘वाउ नेपालमा निकै इफोर्ट दिए, २ वर्षसम्म १० हजारमा काम गरें,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि पनि स्यालरी बढेर १५ हजारसम्म मात्र भयो ।’ आफ्नो मेहनतमा राम्रो आम्दानी भैरहेको थाहा पाएपछि सोनिकाले ५० हजार तलब मागिन् । उनको आग्रह नमानिएपछि उनी काम छाडेर सिंगापुर हान्निइन् । सिंगापुरमा बिरामी भएपछि उनी पुन: काठमाडौं फर्किइन् । अहिले सोनिकालाई लागेको छ— मैले आफ्ना लागि काम गरिन् । वाउ नेपालमै हुँदा सोनिकाले आफ्नो छुट्टै युट्युब च्यानल पनि खोलेकी थिइन्— द सोनिका शो । नेपाल फर्किएर उनी त्यही युट्युब च्यानलमार्फत काममा सक्रिय भइन् । ‘सिंगापुरबाट फर्किएपछि बुवासँग सहयोग मागेर क्यामेरा तथा कम्प्युटरहरू किने,’ उनले भनिन्, ‘अफिस स्थापना गरे । मेरो भाग्य बलियो छ, अहिले राम्रै चलिरहेको छ ।’
सोनिका विदेशमा बस्ने एक जना व्यवसायीसँग प्रेममा थिइन् । ‘उनी एकदमैं वेल एजुकेटेड थिए, मैले घरपरिवारसँग पनि परिचय गराइसकेकी थिए, इन्गेजमेन्ट फाइनल भैसकेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, करिअर छोड भनेपछि मैले उनलाई छाड्नुपर्‍यो ।’ सोनिका आफूले तिनै प्रेमीलाई जीवन सोचेको बताउँछिन् । तर, एक दिन तिनै प्रेमीसँग बेड सेयर गरेकी एक महिलाले भिडियो कल गर्दै भनिन्, ‘लुक एट योर हजवेन्ड । हि इज सिलिपिङ विथ मी ।’ त्यसले उनको जीवनमा अर्को ठूलो झड्का दियो । त्यो ब्रेकअपले आफूलाई पहिलो पटक डिप्रेसन पुर्‍याएको सोनिका बताउँछिन् ।
नाइट लाइफको मस्ती
प्रेममा हुँदा सोनिका ब्वाइफ्रेन्डसँगको नाइट लाइफमा खुबै रमाइन्, तर ब्रेकअपपछि उनले नाइट लाइफ लगभग छाडेकी थिइन् । सिंगापुरबाट फर्केर सोनिका शोमा काम गर्ने क्रममा लिक्युइड लाउन्जमा स्टेज शो गर्ने अफर आयो । लिक्युइड पसेपछि त्यहाँको माहौलले नै उनलाई तान्यो । ‘खाली टाइममा, फुर्सदको समयमा बस्ने राम्रो रेष्टुरेन्ट खोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पहिलेदेखि नै थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘लिक्युइड मन पर्‍यो, मैले सेयर हाले ।’ लिक्युइडमा सेयर नै हालेपछि उनमा पुन: नाइटलाइफको रस बस्न थाल्यो ।
व्यवस्थापन उत्कृष्ट भए पनि लिक्युइड सुनसान थियो । सोनिकाले त्यसलाई चलाउन अनेकन फन्डा अपनाइन् । ६० हजारभन्दा बढी फ्लोअर्स भएको आफ्नो फेसबुकबाट प्रमोसन गरिन्, ऋषि धमलादेखि नायिका सुष्मा कार्कीसम्मलाई बोलाएर ग्राहक आकर्षित गर्ने काम गरिन् । विस्तारै लिक्युइडमा पनि सोनिकाको जादू चल्न थाल्यो, लाउन्जको व्यापार ब्लास्ट भयो । ‘दुईवटा टेबल पनि नभरिने ठाउँलाई मैले ब्लास्ट गरिदिए । विहान अनलाइन अफिस । दिउँसो जिम, मानिसलाई एट्याक्ट गर्नुपर्‍यो नि ? सोनिकाले त एट्याक्ट गर्ने हो नि,’ उनी जोली देखिइन्, ‘त्यसपछि रातिको ३ बजेसम्म लिक्युइड ।’ सोनिका नाइट क्विनमै बदलिइन् ।
जोगिन समलिंगीको फन्डा
सोनिकाले एक पटक आफू समलिंगी भएको घोषणा गरेकी थिइन् । उनले कुराकानीका क्रममा त्यो प्रसंग आफै कोट्याइन् । ‘मैले किन आफूलाई समलिंगी भने होला ? के मलाई मेरो विवाहको चिन्ता छैन ? के ममा घरबार बसाउने रहर नहोला ?’ उनी आफंै प्रश्नको उत्तर दिन थालिन्, ‘म समलिंगी हुँ भनेर अहिलेको हाइवेष्ट प्वाइन्टमा भनेकी हुँ । जब तिमी राम्री हुँदै जान्छौं, चिटिक्क हुँदै जान्छौं, आक्रमण गर्नेहरू बढ्दै जान्छन् । मैले के सोचे भने म त्यसलाई सेफ ल्याण्डिङ गर्छु, त्यही भएर मैले आफूलाई समलिंगी भने ।’
कपिल शर्मासँगको भेट
कपिल शर्मासँगको भेटका सम्बन्धमा सोध्दा उनले आफूलाई लक्की भनिन् । ‘म एकदमै लक्की छु, मेरो भाग्य बलियो छ । मैले उहाँलाई इन्टाग्राममा म्यासेज गरे, ‘आइ एम अ भिजे । आइ वीस्ड टु भिजिट मुम्बई, जस्ट टु टेक योर इन्टरभ्यू ।’ ‘हाइ सोनिका,’ त्यसको रिप्लाई लेख्दै कपिलले यतिमात्र फर्काए ।
दुई/तीन दिनपछि फेरि सोनिकाले अर्को म्यासेज गरिन्, ‘ह्वाट टु डु ? इज इट पोसिबल ।’
कपिलले रिप्लाइ दिए, ‘अल राइट । अबको केही दिनपछि कपिल शर्मा शोकोसुटिङ हुँदैछ । तिमी सेटमै आऊ ।’ त्यसपछि सोनिका क्यामेरा म्यान लिएर मुम्बई पुगिन् । कपिल शर्मा सेटको पछाडि कपिलको अफिसमा उनको अन्तर्वार्ता लिइन् । बलिउडका स्टार कमेडियनको अन्तर्वार्ता गर्दा पनि कसैले प्रशंशा गरेनन् । बरु, एक जना पत्रकारले आफूलाई शरीर सुम्पिएर अन्तर्वार्ता लिएको भनेर फोन गरेको तीतो उनले पोखिन् ।
पूर्वयुवराज पारसको इन्ट्री
सोनिका पछिल्लो समय पूर्वयुवराज पारस शाहसँग देखिन्छिन्, काठमाडौंदेखि पोखरासम्म, नाइट क्बलदेखि हेलिकप्टरसम्म । बेला–बेलामा उनीहरूका तस्बिर तथा भिडियो पनि भाइरल हुन्छन् । आखिर कसरी पारससम्म पुगिन् सोनिका ? त्यसको पनि अलग्गै किस्सा छ । पूर्व राजपरिवार कहिले त्रिसारा त कहिले किङ लाउन्जमा झुल्किरहन्छ । लिक्युइड लाउन्जको सञ्चालक भएपछि सोनिकालाई रोयल फेमिलीलाई आफ्नो लाउन्जमा भित्र्याउने हुटहुटी चल्न थाल्यो । किङ्स लाउन्जमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र परिवारसहित देखिएपछि सोनिका थामिनै सकिनन् । उनले फटाफट फेसबुकमा पूर्वयुवराज पारस शाह सर्च गरिन् । पारसका दर्जनौ एकाउन्टमध्ये एउटामा म्यासेज लेखिन्, ‘म विजनेश पर्सनालिटी/भिजे हुँ, मेरो दरबारमार्गमा आफ्नै लाउन्ज छ । आइ वुल्ड लाइक टु वेलकम यु आवर लाउन्ज । इफ पोसिबल प्लिज कम ।’
पारसको फेसबुकबाट रिप्लाई आयो, ‘ओके ।’ तर, पारसका नाममा फेसबुकमा दर्जनौं एकाउन्ट छन् । सोनिकाको आशा त जाग्यो तर भर पर्न सकिनन् । ‘त्यसभन्दा अघि मैले पारस सरकार को हो भनेर चिनेकी पनि थिइन् । यो भाग्यको खेल हो ?’ उनी भाग्यप्रति अनुगृहित देखिइन्, तर पनि सोनिकालाई पूर्ण विश्वास भने अझै भएन ।
तैपनि उनी पहिलो पटक पारसलाई देखाउनैका लागि सिल्क साडीमा सजिइन् । ‘सरकारका अगाडि पर्न कस्तो साडी लगाउनुपर्छ भनेर निकै खोजेर बाइ हार्ट मैले सिल्क साडी लगाए,’ उनले भनिन्, ‘छोटा पहिरनमा रमाउने सोनिका फेरि पूजामा रुपान्तरण हुनुको कारण यही हो ।’ पारस उनको लाउन्ज पुग्नुपूर्व अननोन नम्बरबाट कल आयो, ‘हामी हिड्यौं ।’ मेकअप र साडीमा सजिएकी सोनिका फूल लिएर स्वागत गर्न उभिइन् । स्वागत गरिसकेपछि बल्ल सोनिकालाई अन्धकारमा हानेको तिर सही ठाउँमा लागेको विश्वास भयो ।
पारस पनि बूढानीलकण्ठ पढेका, सोनिकाको पाँच वर्ष पनि त्यही बितेको । दुवैका धेरै कुरा मिल्न थाले । कुन हाउसमा बसेको, क्याप्टेन भयौ–भएनौ, यस्तै–यस्तै । ‘हि लभ्स माइ कम्पनी,’ सोनिका भन्छिन्, ‘म एकदम जोली क्यारेक्टर, सबैसँग मिल्न सक्छु ।’ त्यो दिन पारस जुस र खाना खाएर फर्किएको उनले बताइन् ।
‘आई विस्ड टु मिट हिम अगेन,’ सोनिकाले भनिन्, ‘म त अलि हरामी क्यारेक्टर ।’ सोनिकाले फेरि पारसलाई भनिन्, ‘आइ वान्ट टु मिट यु अगेन ।’ ‘ओके लेट्स मिट अन्नपूर्ण,’ पारसले उत्तर फर्काए । यति धेरै मानिसको भीडमा पारसले आफ्नो अनुरोध स्वीकार गर्नुलाई नै ठूलो भाग्य मान्छिन्, उनी । अन्नपूर्णमा भेटेको कुरा त बजारमा गसिप बन्न थालिहाल्यो । त्यो गसिपपछि केही समयसम्म दुवै नबोलेको उनी बताउँछिन् ।
त्यसपछि अर्को भेटका लागि पारसले नै आग्रह गरे, ‘लेट्स मिट अगेन ।’ यिनै बाक्लिँदा भेटघाटहरूले उनीहरूबीच मेलमिलाप पनि बढायो । लिक्युइडमा सोनिका वाइल्ड रुपमा प्रस्तुत हुन्थिन् । झ्याप्प केटाहरू समात्ने, मस्तसँग डान्स गर्ने । सोनिकाको होहल्ला गर्ने बानी र वाइल्ड छवि पारसलाई मन परेनछ । एकदिन नाचिरहेका बेला लिक्युइडमै पारसले सोनिकालाई एक झापड हिर्काए । ‘धेरै केटाहरूको अगाडि म वाइल्ड भएर नाचिरहेकी थिए,’ सोनिका भन्छिन्, ‘छोरी मान्छेलाई सायद त्यो क्यारेक्टर राम्रो देखिएन्, धेरै केटाले मलाई छोइरहेको उहाँलाई मन परेन, एक झापड हिर्काउनुभयो ।’ पारसको क्रोध सोनिकामाथि वर्षिएपछि संगीत र होहल्लाको रौनकमा डुबेको लाउन्ज शान्त भयो । पारस भने फटाफट निस्किएर आफ्नो बाटो लागे ।
उक्त घटनापछि पनि सोनिका र पारसको संवाद एवं भेटघाट टुटेन । ‘उहाँ रिसाउने तर म उहाँसँगै जाने, उहाँले पिट्ने मचाहिँ उहाँसँगै जाने । किन, किन गैरहेकी छु ?’ उनले आफैंलाई प्रश्न गरिन्, ‘म उहाँको पैसाका लागि गएकी होइन, मेरो आफ्नै कुस्त पैसा आउने आर्थिक स्रोत छन् ।’ सोनिका पारसले धेरै पटक आफूलाई देश, राजनीति, नारी हुनुको अस्तित्व, युवाहरूको कर्तव्यलगायतका विषयमा बुझाउने प्रयास गरेको कुरा बताउँछिन् । ‘तर, म बुझ्दै नबुझ्ने । अर्को एक पटक पारस त्यसैगरी कड्किए,’ उनी थप्छिन् । त्यसपछि भने उनमा केही परिवर्तन देखा पर्न थाल्यो ।
पारसले सम्झाएपछि सोनिका वर्षौंपछि मनैदेखि दसैं मनाउन घर गइन् । जब घर पुगिन्, उनलाई पैसाभन्दा ठूलो कर्म रहेछ भन्ने महसुस हुन थाल्यो । घरको सुन्दर भ्यू, डाँडापाखा, खेतवारी, बारीमा फलफूल, महघारी, माछा पोखरी, कुखुरा फार्म, आमाले लगाएको तरकारीको टनेल सबै पुगेको देखिन्, त्यो पनि पैसा बिना नै । यसले सोनिकाको मंथिगलमा थप हलचल ल्यायो । ‘त्यसो भए हामी पैसाकै पछाडि किन दौडिरहेका छौं भनेर झट्का लाग्यो,’ उनी भन्छिन् । त्यसपछि आफूले छोटा पहिरनको ठाउँमा सभ्य पहिरन लगाउन थालेको सोनिका बताउँछिन् । पारससँगकै संगतका कारण उनले आफूले देशको कला, संस्कृति, धर्म, इतिहास आदिका बारेमा विस्तृत ज्ञान पाएको बताइन् । सोनिकालाई मान्ने हो भने पारस डिस्को, क्लब र बारमा रुमल्लिरहेको युवापुस्तालाई सुधार्नकै लागि पुग्छन् ।
सोनिकाले पारससँग नियमित भेटघाट गर्नुको कारण के हो त ? उनी भन्छिन्, ‘उहाँले मलाई हरेक भेटमा देशका कुरा भन्नुहुन्थ्यो, म बुझ्दिनथें, म वाइल्ड एनिमल नि त † अब उहाँले डोमेस्टिक बनाउन खोज्नुभएको कुरा कसरी बुझूँ ?’ सोनिका पारसले नै आफूलाई नारी हुनुको अस्तित्व, देश, राजनीति, संस्कृति आदिका बारेमा बुझाएकाले उनको संगतमा लागेको दाबी गर्छिन् । उनी पारसकै कारण आफू घिनलाग्दो संसारबाट नयाँ संसार र सकारात्मकतातर्फ अघि बढेको दाबीसमेत गर्छिन् ।
उनी आफ्नो र पारसबीचको सम्बन्धलाई नाम दिने जिम्मा भगवान्लाई नै छाडिदिन आग्रह गर्छिन् । ‘किनभने, उहाँ मेरो गुरुका रुपमा पनि आउनुभएको छ, एकदमै मिल्ने साथीका रूपमा पनि आउनुभएको छ, अभिभावकजस्तो पनि हुनुहुन्छ । म यसको सबै क्रेडिट भगवान्लाई दिन चाहन्छु । मैले पारस सरकारबाट दीक्षा पाएँ,’ उनले भनिन् । उनले अब आफू सकारात्मकर्मतर्फ लाग्ने अठोट व्यक्त गरिन् । ‘अब सोनिका हरेक दिन साडी र शरीर ढाकिने कपडामा देखिनेछ,’ देश, राजनीति अनि धर्म–संस्कृतिमाथि पनि लामो प्रवचन दिएपछि उनले भनिन् ।
हिमानीसँग कुराकानी गर्छन् पारस
पूर्वयुवराज पारस शाहका बारेमा सोनिकाको बुझाइ फरक छ । पारस पत्रपत्रिकाले चित्रण गरेजस्तो व्यक्ति नभएको उनको दाबी छ । ‘उहाँको एउटा लजिक— अंग्रेजीले ‘ए’बाट एप्पलदेखि ‘जेड’बाट जेब्रासम्म सिकाउँछ भने नेपालीले ‘क’बाट कलमदेखि ‘ज्ञ’बाट ज्ञानी हुन सिकाउँछ । हामी त्यतिबेलादेखि नै कति लजिकल छौं । उहाँ आफैं सेल्फ स्टडी गर्नुहुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘जो युवा उहाँको संगतमा पुग्छ, त्यसको बेस्ट मान्छे बन्छ ।’ सोनिका पारसलाई पोलिटिक्सले घिनलाग्दो मान्छे बनाएको दाबी गर्छिन् ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र तथा हिमानीसँग पनि पारसको सम्बन्ध सुमधुर रहेको दाबी उनले गरिन् ।
‘फ्यामिलीसँगको सम्बन्ध त राम्रै देख्छु । सबै देखेको वा सुनेको कुरा मात्र सत्य हुँदैन । हिमानीसँग कुरा गरेकै, छोराछोरीसँग कुरा भएकै देखेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘ड्याडी सोनिकासँग यस्तो समाचार आयो के हो भन्दै छोराछोरीले सोध्दा पारसले मजस्तै बाटो हराएकी केटीको हो भनेर जवाफ दिएको म्यासेज मलाई नै देखाउनुभएको हो ।’ आफूले कहिलेकाहीं सोध्दा पारसले बुवासँग मिटिङमा भएको बताउने गरेको पनि बताइन् । ‘बाहिर पनि भेटघाट र बैठकहरू भैरहेको हुन्छ । फेमिली ग्रुपमा गरेको म्यासेज पनि देखाउनुभएको छ,’ उनले थपिन् ।